Kusanaya kuri kuenderera kudzikira kweAroostook County goho rembatatisi - Nhau dzeMbatatisi
Kusanaya kuri kuenderera kunopera Aroostook County mbatatisi goho
in KUDIRIRIRA, America
Nguva yekuverenga: 15min kuverenga
Goho rembatatisi regore rino rakasangana nekusanaya kwemvura kusingadzokere uko kwakaderedza zvirimwa nekusunga zviwanikwa zvemvura kune varimi veAroostook County.
Mushure mekurasikirwa nehusiku huviri hwekurara pamusoro pekudzikira kwezvibereko zvembatatisi, Kevin Grass akabuda pamubhedha nenguva dza3 mangwanani mangwanani-Nyamavhuvhu mangwanani ndokutanga kukwenya manhamba kuti aone kuti achabhadhara sei gore rinokosha remapurazi.
"Tiri munyatwa," akadaro Kevin apo aifambisa mucheki wembatatoni gumi nemashanu kuenda kumberi achinyora zvinyorwa pachirimwa uye nekuongorora vashandi vake - mabasa aakauya kuzotonga panguva imwe chete mumakore makumi matatu apfuura. "Goho redu raenda kure."
Grass muridzi uye anoshanda Grass Mapurazi nababa vake - Duane Grass - muMars Hill, guta rinogara isingasviki mamaira kubva kuCanada muganho kuchamhembe kwakadziva kumabvazuva kweAroostook County. Akapenya ematsutso mavara pamwe nehomwe dzerima girini pini dzinoisa mudunhu nguva ino yegore, asi kusanaya kwemvura kwakakanda mumvuri pamusoro peanodonha mashizha. Goho rembatatisi, rakatanga mukupera kwaNyamavhuvhu, richasvika kumagumo mumasvondo anotevera.
Kevin Grass anotungamira mucheki wematatoni gumi nematanhatu kuburikidza neminda yematatisi kuGrass Farms muBlaine musi waSeptember 15. Kusanaya kwemvura kwakakonzera goho rake rembatatisi kuva pasi pechitatu gore rino. Mufananidzo naKatie Brown.
Goho rembatatisi kuGrass Farms rakadzikira chechitatu gore rino, uye varimi varo vane mwaka vanonongedzera kusanaya kwemvura sesimba rekutyaira. Mvura yakakosha kumapurazi asina kudiridzwa akaita seGrass 'nekuti vanovimba nekuwanda kwemvura yekunaya yaAmai Zvisikwa kuunza mahekita mazana maviri embatatisi dzavanorima kumusika.
"Ndakaona mashiripiti akaoma asi hapana chakadai," akadaro Duane Grass, makore makumi masere nemapfumbamwe, murimi wechitatu-chizvarwa chirimi chembatata uyo akashanda munda kwemakore makumi mashanu nemanomwe. "Hatina kunaya mvura kubvira musi wa77 Chivabvu."
Pakati-Chivabvu yakava nguva yakakosha yevarimi nemasayendisiti gore rino, sezvo tembiricha ichidziya uye kunaya kwemvura kwakaramba kusipo. Tembiricha dzinodziya dzakabvumira mvura kubuda nekukurumidza, ichidzivirira yakakosha yemvura yepasi uye ichikonzera mafashama ekuyerera kudonha pazasi peyakajairika muna Chikumi.
"Pamusoro-tembiricha iri pamusoro nepasi-pazasi (itation) - mubatanidzwa uyu wakanyanya kushata pakurima," akadaro Nicholas Stasulis, musayendisiti wezvemvura muMaine ane United States Geological Survey. Masayendisiti akagadzira kusangana uku kwemamiriro se "kusanaya kwemvura," kwakatanga pakati paJune, sekureva kwaStasulis.
Kutevera mwaka wezhizha zvisina kujairika, Maine yakaramba ichisangana nekusanaya kwemvura munaGunyana wese kusvika munaGumiguru, zvikamu zveAroostook County zvichisangana nekusanaya kwemvura kwakanyanya kana kwakanyanya. Dhipatimendi reUnited States rezvekurima rakazivisa Aroostook County nzvimbo yekusanaya kwemvura mukupera kwaGunyana. Kutendeseka kweUnited States Drought Monitor.
Nyamavhuvhu yakasarudzika yakatungamira United States department rezvekurima kuzivisa Aroostook County nzvimbo yekusanaya kwemvura kupera kwemwedzi wapfuura. Kudomwa kwakavhura mari yezvikwereti zvepurazi zvechimbichimbi zvakanangana nekubvisa mari inounzwa nenjodzi dzinongoitika dzega kana goho rakadzikiswa nezvikamu makumi matatu kubva muzana kana kudarika - zvinoitika pamapurazi embatatisi mhiri kweAroostook County gore rino.
Kusanaya kune varimi vezvizvarwa uye nyanzvi mumaindasitiri muMaine vachishamisika kana zvave kudikanwa kudyara masisitimu ekudiridza. Vamwe vakawedzera kutarisa kwavo pahutano hwevhu.
“Ndinovimba kuti izvi hazvizove tsika itsva. Kana zvikadaro, tinobva tava kurima pakaoma uye tobva tatongwa zvisingabviri, ”akadaro Kevin Grass. "Ipapo unofanira kudiridzira uye hatina chete sosi dzemvura dzakaringana kuti tiite izvozvo."
'Chimwe chezvirimwa zvakapusa pane zvatakambochera'
MuBlaine, mamaira mashoma kubva kuGrass Farms, Gregg Garrison anga achiedza nekudiridza. Garrison, chizvarwa chechipiri murimi wembatatisi, anoshanda Double G Farm nababa vake, Wayne, nevana vaviri - Olivia Hammond naSpencer Garrison - vakagadzirira kutora oparesheni rimwe zuva.
Matt Crouse weDouble G Mapurazi anotyaira tarakita inodhonza vhiri remhepo. Chinosungirirwa nemhepo chinodzinga mbatatisi kubva pasi uye kuita mutsetse pamberi pekupedzisira kwekupedzisira kwemuchina wekukohwa. Mufananidzo naRoger McCord.
Double G Mapurazi anodiridzira gumi muzana ema 10 acres embatatisi inokura.
“Mugore rakajairika, taisazoona mutsauko pakati pembatatisi inodiridzwa neisina kudiridzirwa nekuti kazhinji tinenge tichingonaya. Asi gore rino tinoona musiyano mukuru nekuti hatina kunaya, ”akadaro Hammond.
Iko kunowanzo kune gumi mbatatisi kubva kune yega yega isina kudiridzirwa chirimwa, Double G ikozvino inoona manomwe chete - kana makumi matatu muzana mbatatisi mashoma. Miti yemadiridziro iri kuburitsa avhareji yematapiri gumi pagwenzi gore rino, uye saizi uye chimiro zviri nani, sekutaura kwaHammond.
“Iyi ndiyo pamwe ndiyo kusanaya kwemvura kwakaipisisa mumakore angu ose kubvira '88, uye Baba vanotaura zvakafanana uye vakarima kubvira '65,” akadaro Gregg Garrison. "Tiri mundima isingazivikanwe kusvika padanho rekuti zvimwe ichi chichava chimwe chezvirimwa zvisina kuremerwa zvatakambochera." https://www.youtube.com/embed/zk1GBwSTGAs
Kunyangwe paine kushushikana, Gregg Garrison akati Double G ichakwanisa kuzadzikisa chibvumirano chayakaita muchirimo nemuparadzi wepasi rose McCain Potato nemugadziri wenyika Pineland Farms Potato Company, iyo inoshandura mbatatisi kuita chikafu chinokurumidza-kuita kunge mafirita uye machipisi embatata.
Asi pakati pokusanaya kwemvura pamwe nehupfumi hwe coronavirus, purazi harina huwandu hwembatatisi, zvinoreva kuti hapazovi nemari yekuwedzera gore rino yekudyara kudzoka mubhizinesi.
Kuderedza njodzi senzira yeinishuwarenzi
Mazuva anodziya, husiku hunotonhorera uye nevhu rinorema rinochengeta hunyoro hwakawanda zvese zvinotsigira Maine inoratidzira indasitiri yemazamu muAroostook County. Sezvo mvura inowedzera kuwanda uye tembiricha ichiwedzera, ivhu reMaine harizochengetedze iwo iwo mwando mwero.
"Ndinofunga muchaenderera mberi nekuona varimi vakawanda vachifarira uye muchida kuita kudiridza sechishandiso chekuchengetedza njodzi," akadaro Don Flannery, director director weMaine Potato Board. "Maine anga ari mubhizinesi rembatatisi kwenguva yakareba, uye imhaka yemamiriro ekunze."
Mapombi matatu ekudhizirira-anomhanya ekudiridza anogara padivi pePstile Stream muAroostook County. Iyo BD Grass & Sons yemhuri purazi inoshandisa aya mapombi kudhonza mvura kudiridza 2,500 maeka etapiri. Mufananidzo naKatie Brown.
Kuzvidzivirira uye kupisa kunopisa vane hurumende vanodzora uye nevamiriri vemaindasitiri vakatarisa pakuvaka kusimba mukutarisana nematambudziko ekuchengetedza zvekurima.
"(Varimi) vese vanonyatsoziva kuti zvinhu zviri kuramba zvichioma uye kuvimba nemvura yekunaya hachina kuvimbika sezvazvaimboita, apo baba nasekuru vavo vairima," akadaro Bill Sheehan, director weDhipatimendi reEnharaunda. Kudzivirirwa hofisi muAroostook County. "Ivo vanozviisa pasi pekuda kwemamiriro ekunze."
"Paunenge uri murimi uye madigiri makumi mapfumbamwe uye chirimwa chako chiri kutambura - unonzwa kunge svikiro paunokwanisa kuisa mvura pariri woita kuti rirarame uye riite purofiti."
- Brent Grass, co-muridzi weBD Grass & Sons purazi
Sangano reUSA Natural Natural Conservation Services (NRCS) rinopa chirongwa chekugovana-mutengo - iyo Environmental Quality Incentives Chirongwa - iyo inobatsira varimi kuisa mari mumapurazi zviwanikwa, zvishandiso netekinoroji izvo zvinokurudzira kuita kwakasimba.
BD Grass & Sons ipurazi remhuri muBlaine iro rakatanga kuisa mari muzvivakwa zvemadiridziro kuburikidza neNRCS chirongwa chekugovana mutengo mukutanga kwema1990. Brent Grass nemunin'ina wake, Neil, vanorima mahekita mazana maviri nemazana mashanu embatatisi pagore, vanodiridza zvikamu makumi mana kubva muzana zvevhu ravo, uye vanoisa pekutanga kutenga mapurazi pedyo nenzvimbo dzemvura dzine hutano.
“Yakawedzera zvakanyanya zvimwe mumakore gumi apfuura. Varimi vazhinji vanga vachisvetuka-svetuka, vachishandisa mari yakawanda, ”akadaro Brent Grass.
Hama dzinonzwa rombo rakanaka kuti vane kudiridzira, "asi hazvibhadharwe," akadaro Brent Grass, uyo ave muridzi wepurazi nemukoma wake kubvira 1997. "Zvinoda rubatsiro rwehurumende nekuti zvinhu zvacho zvinodhura."
Brent Grass yeBD Grass & Sons yemhuri purazi inochera mbatatisi kuratidza goho diki iye nevamwe varimi vembatatisi vakaona mwaka uno muAroostook County. Mufananidzo naKatie Brown.
Nzvimbo yavo yekudiridza inosanganisira 10 mamaira epasi pevhu ekudiridza pombi uye gumi nepakati pivot ekudiridza masisitimu ayo anotengesa ingangoita zviuru zana zvemadhora uye inodhura madhora chiuru nemazana mashanu pahekita mumitengo yekutanga kwezvivakwa, kusanganisira kuisa pombi nekupomba mvura. Izvi zvinoreva kuti inodhura Brent neNeil Grass inosvika $ 11 miriyoni yekuisa michina yemadiridziro makumi mana muzana yezvirimwa zvavo zvembatatisi vasati vaisa mari muzvinhu zvakasiyana semafuta ekufambisa sisitimu.
“Paunenge uri murimi uye madhigirii makumi mapfumbamwe kunze uye chirimwa chako chiri kutambura - unenge uchinzwa senge n'anga paunokwanisa kuisa mvura pairi woita kuti irarame uye ive nepundutso. Pamwe ndiko kunzwa kukuru. Zvinoshamisa, ”akadaro Brent Grass.
Kunyangwe iine-ye-iyo-yehunyanzvi kudiridza, BD Grass & Vanakomana vanofungidzira $ 1.2 miriyoni mukurasikirwa nekuda kwekudonha makumi matatu muzana muzvibereko zvembatatisi. Nepo chirimwa chinodiridzwa chichigadzira 30 kusvika 60 muzana mbatatisi dzeBD Grass & Sons, Brent Grass yakati, kwete ese makore anoda kudiridza kwakanyanya kunodiwa muna 85.
“Hazvisi sekurima matapiri mugwenga gore rega-rega. Pane makore atisingashandise uye ndizvo zvinoita kuti zvive zvakaoma kuita mari. Unogona kuenda makore maviri kana matatu uye usingaishandise zvachose. Unotenga mota inishuwarenzi - hausi kuronga kupinda mutsaona, futi. Zvakafanana nazvo, ”akadaro Brent Grass.
Kuiswa kwemvura uye kugadzirisa ivhu
Kuisa mari mukudiridza kwezvirimwa uye kurima ivhu rakagwinya, risingadziye kusanaya kwemvura inzira mbiri dzevarimi muAroostook County, seGarrison, vari kurwisa kuwedzera kwekusanaya kwemvura uye kupisa kwenguva refu.
"Mushure memwaka uno, ichave iri pamusoro pevarimi vazhinji kuti vawane madiridziro emamwe maeka," akadaro Sheehan weMaine weDhipatimendi reKuchengetedzwa Kwemamiriro ekunze. "Kuziva kuti mvura iyoyo (icha) bva kupi mugore rakadai ra2020 ichava dambudziko guru."
Iyo 1,700-tsoka-yepakati pivot yekudiridza system inotambanudza ivhu kune iyo BD Grass & Sons mhuri purazi muBlaine. Mufananidzo naKatie Brown.
Sheehan ari kushanda neMaine's Department of Agriculture, Conservation and Forestry kudzorera Maine Agricultural Water Management Board, yanga ichishanda panguva yaGov.John Baldacci manejimendi asi yakadzikira pasi paGavhuna Paul LePage nekuti hapana nhengo dzakagadzwa kubhodhi. State statute inorayira kuti Dhipatimendi rezvekurima komisheni isarudze nhengo shanu - kusanganisira mumwe anogadzira mbatatisi - uye gavhuna anodoma nhengo nhatu.
"Mushure megore rino tinoona zvakakosha kuti bhodhi rikwirirane uye tichifunga nyaya huru idzi," akadaro Sheehan.
Mushure memwaka uno, ichave iri pamusoro pechinyorwa chevarimi vazhinji kuti vave nemadiridziro emamwe maekare avo. Kuziva kuti mvura iyoyo (icha) bva kupi mugore rakadai ra2020 ichava dambudziko guru. ”
- Bill Sheehan, director weDhipatimendi reKuchengetedzwa Kwemamiriro ekunze eAroostook County hofisi
Iyo Water Management Board ichadzoserwa pakupera kwegore pakutanga, sekureva kwaNancy McBrady, hofisi yemukuru wezvekurima kuMaine weDhipatimendi rezvekurima, Conservation uye Masango.
"Zvinotorwa nguva yakareba kupfuura zvataizoda, asi tiri kuzowana izvi," akadaro McBrady. "Chokwadi ivhu rakagwinya rinoda mvura isingachinji uye kuisa zvidimbu izvi pamwe kunenge kuri kunetsa."
Kukosha kwekuve nemvura inowanika yekurima mbatatisi yaive nyaya yepakati Sheehan uye varimi vakadzokera nekudzoka mugore rino. Hova diki uye dzepakati nepakati dzakasvika pakadzika zvakadzama muzhizha rino, izvo zvakaita kuti Dhipatimendi reKuchengetedzwa Kwemagariro kupindira nekudzora kubviswa kwemvura.
Kudonhedza pamusoro uye pasi pemvura pasi zvinoratidzira huwandu hwemvura varimi vanogona kukwevera kubva kunharaunda. Ipo Sheehan newaaishanda naye vachirambidza kudzora mari, havana kuzadzisa zvakakwana kudzika kwemitemo sekufarira varimi vaitotambura.
“Dai vakazvisimbaradza, vangadai vakatidzinga mubhizimusi rose gore rino. Ivo havana, asi vane simba rekuzviita, ”akadaro Brent Grass weBD Grass & Sons.
"Uku hakusi kurima kwemubatanidzwa, aya mapurazi emhuri mushure memazera uye ndinonzwisisa kushushikana kwaunonzwa kana uri chizvarwa chechitatu kana chechina uye zvinhu zvisiri kufamba zvakanaka," akadaro Sheehan. “Ndiri kunzwira izvozvo asi panguva imwe chete tinofanirwa kunge tiine mvura uye hova dzakanaka, uye nekuchengeta hove dzichishambira. Hatigoni kungoyamwa yakaoma. ”
Kushomeka kwemvura kunowedzera kuvimba nekutsime
Yakanaka mamiriro ekurima mbatatiri inodaidzira inchi yemvura pavhiki kuti zvishoma nezvishoma idiridze matapiri ari kukura. Gore rino varimi vari kushanda vachipesana nekushomeka kukuru kwekunaya kwemvura pamwe nenzvimbo dzenyika dzakatarisana nemainji gumi pasi pekunaya kwemvura, sekureva kwaStasuli.
"Kuva masendimita gumi kumashure kwatinofanira kunge kwakakosha, saka zvinonetsa," akadaro Stasuli. “Tinoda mvura yakaringana uye haigone kuitika kamwechete. Kuwana gumi inches mumazuva maviri hakusi kuzotibatsira. Tinoda mvura yakareba kwenguva yakareba uye ndizvo zvatiri kutarisira. ”
Brent Grass yeBD Grass & Sons yemhuri purazi inomira apo mutsetse wemvura pane dziva rakagadzirwa nevanhu yaimbova mvura isati yaburitswa nekuda kwekusanaya kwemvura kwegore rino. Mufananidzo naKatie Brown.
Mvura inonaya zvishoma nezvishoma inoda kumutsiridza huwandu hwepasi pevhu hunopa matsime, madziva, hova uye nzizi chinhu chakakosha nekuti dutu rine simba rinotungamira kumafashama uye mvura inokurumidza kukunguruka kubva panzvimbo dzinotsvedza panzvimbo pekupinda zvishoma nezvishoma nepakati pemubhedha kuenda mumifashama yepasi pevhu. Iyo recharge yakanyanya kukosha kune varimi vanodhonza kubva munzvimbo idzi dzemvura kudiridza minda uye kumhanyisa mabhizinesi.
Gore rino, Pineland Mapurazi aifanira kuchera matsime maviri matsva panzvimbo yayo kuzadzisa zvinodiwa nemvura, uye BD Grass & Sons vaifanira kushandisa tsime senzvimbo yemvura kekutanga.
Double G Farms, iyo yaifanirwa kuchera imwe yehova mbiri dzainoshandisa senzvimbo dzemvura papurazi gore rino, iri pakati pemazana evanhu muAroostook County vane matsime akaoma gore rino.
Jim Watson ndemumwe wevashoma vevanodzika tsime avo vakataura kukwira kwekushandira matsime akaoma, vachifona kakawanda kuvarimi, kusanganisira Hammond yeDouble G Farms.
"Gore rino gore rekutanga mune rangu basa randakakwanisa kutora uye kusarudza basa randinoda kuita - kekutanga muhupenyu hwangu - nekuda kwenhamba," akadaro Watson, anova chizvarwa chechina cheAroostook County zvakanaka. Driller. Watson akati kana kusanaya kwemvura kwakapfuurira kusvika muna Gumiguru kana Mbudzi pasina chero mvura yakakosha, iyi ndiyo ichave yakaipa kwazvo yaanoona.
'Wakazvarwa uine tsvina yembatatisi muropa rako'
Kuenderera mberi nekuwedzera kwekutengeswa, varimi vakaita semhuri yeHemphill vakapunyuka kukonzeresa kwegore rino rakanyanya kusanaya kwemvura, asi budiriro yavo inoenderana nemvura isinganayi.
"Takanaya mvura pataida," akadaro Greg Hemphill, chizvarwa chechishanu chePresque Isle murimi wembatatari muridzi weHemphill Farms nemukadzi wake uye vaviri vevanakomana vake vana.
Greyden Hemphill inotora zororo kubva mangwanani ekurima mbatatisi papurazi sekuru vake, sekuru vakatenga makore zana apfuura. Mufananidzo naKatie Brown.
Maoko eHemphill akashanda iyo yekutanga purazi yemhuri muPresque Isle kubvira 1920 - apo sekuru vaHemphill, Roland S. Hemphill, vakaitenga. Nhasi, Hemphill Farms inokura uye kutengesa mbeu mbatatisi, musana webhizimusi rembatatisi rakagadziriswa.
“Mbeu ndiyo kiyi kune zvimwe zvese. Ukasadyara mbeu yemhando yepamusoro, haukwanise kutarisira chigadzirwa chakanaka, ”akadaro Kevin Grass weGrass Farms, uyo anovimba nembatatisi yembeu kuzadzisa zvibvumirano zvake.
"Ndiko kunotanga mwaka wavo wekurima, kutenga mbeu pano," akadaro Garrett Hemphill, dangwe raGreg.
Kune nguva dzose njodzi, ndinofungidzira, nekurima. Inogona kunge iri (iyo) coronavirus. Kungava kusanaya kwemvura. Zvinogona kuve zvese panguva imwe chete. Tinogara takangwarira. ”
- Garrett Hamphill, mumwe muridzi weHemphill Farms
Varimi muAroostook County uye pasi pegungwa kubva kuPennsylvania kuenda kuFlorida, uye kukwira kuCanada, vanotenga Hemphill mbeu mbatatisi mwaka wega wega kuti vadzokezve, kukohwa nekutengesa chigadzirwa chekupedzisira kune vanogadzira mbatatisi voita purofiti. MaHemphill anonyatsovimba nemvura kune maeka 350 embeu mbatatari dzavanogadzira mwaka wega wega.
Zvibereko zvakadzika pasi gumi muzana kudonha uku kubva kusanaya kwemvura, asi mbeu yega yega mbatatisi maHemphill akakohwa mwaka uno yakataurwa.
Kudonha uku kwave "kwakakwana 180" kubva muchirimo, Garrett Hemphill akadaro, apo vatengi pavakazeza kutenga mbeu mbatatisi nekuti mapurosesa aive asina chokwadi kuti vanhu vachange vachidya here kana kutenga chikafu chinokurumidza sezvo hupfumi hwakavharwa kubva padenda. Izvi zvakasiya mapaundi zviuru makumi maviri zveHemphill mbatatisi - ingangoita zvikamu zvishanu kubva muzana zvezvirimwa zvavo - vasina imba munaKurume apfuura.
Nemisika yadzikira, kushaikwa kwemabasa kuchikwira uye vanhu vachinetseka kuwana raramo, maHemphill akafunga kupa imwe mbeu mbatatisi nekukoka vanhu kuti vauye kupurazi vazvitorere mabhegi.
"Kune njodzi nguva dzose, ndinofungidzira, nekurima," akadaro Garrett Hemphill. "Inogona kunge iri (coronavirus). Kungava kusanaya kwemvura. Zvinogona kuve zvese panguva imwe chete. Tinogara takangwarira. ”
Judd Hemphill - ane makore makumi manomwe nemashanu ekuberekwa, murimi wechina wembatatisi - anomira padyo nembwa yake Einstein pamberi pemucheki wemazambatata aakatyaira papurazi remhuri kubvira kuma75. Mufananidzo naKatie Brown.
Iyi tsika yekutsungirira yakabvumidza Hemphill Mapurazi kukura gumi kagumi muhukuru pamusoro pezana rapfuura. Judd Hemphill, ikozvino makumi manomwe neshanu, akarwira ramangwana maHemphill kuti ave neruoko mukudyara mbeu yavo muPresque Isle.
"Ndakave nerombo rakanaka rekukwanisa kuchengeta purazi (apo) varimi vazhinji havana," akadaro Judd Hemphill. "Ndiri kufara kuti ndakachengeta purazi iri kuti ripfuure."
Judd Hemphill akarega basa muna 2011 asi achiri kubatsira mune imwe nzvimbo zuva rega rega. Baba vake vakamukurudzira kuti aende kune chero munda kunze kwekurima, asi midzi yake yekurima yakadzika yakadzika.
"(Ndicho chete chinhu chandanga ndichida kuita," akadaro Judd Hemphill. "Wakazvarwa uine tsvina yematatisi muropa rako."
Iwo maHemphill madiki anogoverana kuzvipira kwaJudd, asi mushure memwaka wakakanganiswa neese kusanaya uye nedenda, vari kuda kuziva nezveramangwana.
"Zvinoita kuti ndinetseke kuti chii chichaitika gore rinouya," akadaro Greg Hemphill.
Tags: kudiridzaMbatatisi kudiridza
Iyo Irish spud: Kudyara mbeu pasirese